Inbox Repair Tool Inotadza
musha Products DataNumen Outlook Repair Kanganiso isingatarisirwi yakadzivirira kupinda kweiyi faira. Shandisa ScanDisk kutarisa diski yezvikanganiso, uyezve edza kushandisa Inbox Kugadzirisa chishandiso zvakare.
Inbox Kugadziridza Chishandiso Kundikana Kugadzirisa Yakaora kana Yakakuvadza Mafaera ePST
Paunoshandisa Outlook Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) kugadzirisa rakakanganisika kana rakashatisa faira reOptlook yemunhu (PST) faira, chishandiso chinokundikana uye inotaura inotevera meseji yekukanganisa:
Iyo Inbox Kugadzirisa Turu haina kuziva iyo faira xxxx.pst. Hapana ruzivo runogona kuwanikwa.
uko 'xxxx.pst' izita reiyo PST faira kuvhurwa.
Pazasi pane skrini yekanganiso:
Kuora kana kukuvara kweiyo PST faira yakaipa kwazvo zvekuti Inbox Repair Tool (Scanpst) haigone kugadzirisa iyo faira.
Iwe unofanira kushandisa DataNumen Outlook Repair kugadzirisa iyo yakaipa PST faira. Nemaitiro epamusoro uye algorithm nzira, DataNumen Outlook Repair inogara ichidzorera most yeiyo inodzoreredza fomu fomu yakashata PST faira, saka ndiyo yakanakisa yekudzosera Outlook chishandiso mumusika.
Corrupt File: Test2.pst
Faira rakagadziriswa na DataNumen Outlook Repair: Test2_fixed.pst